Niatrika bala fingotra, baomba mandatsa-dranomaso alefan’ny polisy ny vehivavy tao Torkia rehefa nanao diabe hampitsaharana ny herisetra satria lahy/vavy · Global Voices teny Malagasy
Nasongadin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny fitomboan'ny tahan'ny famonoana vehivavy sy ny herisetra ao Tiorkia
Voadika ny 08 Desambra 2021 4:00 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary nozarain'ny mpanao gazetin'ny DW, Julia Hahn.A screenshot from a video shared by DW journalist Julia Hahn.
Vehivavy an-jatony no nidina an-dalambe tany Istanbul tamin'ny 25 Novambra mba hanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Fanafoanana ny Herisetra mihatra amin'ny Vehivavy. Na izany aza, niharan'ny herisetran'ny polisy ireo mpanao fihetsiketsehana, nampiasaina amin'izany ny baomba mandatsa-dranomaso sy ny bala fingotra, rehefa niezaka namaky ny barazy izy ireo mba hanao diabe tao amin'ny arabe feno mpandeha an-tongotra. Nisy hetsi-panoherana mitovy amin'izany nanerana ireo tanàna hafa, anisan'izany ny renivohitra Ankara.
Manohy ho fanantenana, miaraka amin'ny fanantenany, ny fientanentanana, ny fahavononana ary ny hafanam-pony ny vehivavy. Nanova ny alina ho andro izy ireo teny amin’ny lalambe Istiklal.
Tsy hangina, tsy hatahotra, tsy hankatòa izahay.
Niaraka tamin'ireo vondrona vehivavy ihany koa ireo mpikatroka LGBTQ+ :
Nikarakara hetsi-panoherana tao Istanbul, Torkia ny vehivavy sy ny mpikatroka LGBTIQ+ tamin'ny 25 Novambra 2021 nandritra ny Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra mihatra amin'ny Vehivavy.
Ny fitakiana lehibe teny an-dalambe dia ny hidiran'i Tiorka indray amin'ny Fifanarahana Istanbul — fifanarahana tena ara-dalàna momba ny zon'olombelona napetraky ny Filankevitr'i Eorôpa izay miantoka ny fisorohana, ny fanenjehana ary ny fanafoanana ny herisetra an-tokantrano ary mampiroborobo ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. Nanambara ny fanapahan-keviny hiala amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena i Tiorkia tamin'ny volana marsa tamin'ity taona ity. Tamin'ny volana Jolay, nanohitra ny fialàna ofisialy ireo vehivavy manerana ny firenena.
Lavitry ny araben'i Istiklal feno olona, nanamarika ny andro ihany koa ny Filoha Recep Tayyip Erdoğan, nampanantena fa hanafoana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy indray andro any. “Manantena aho fa hanafoana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy isika amin'ny alalan'ny fanamafisana ny soatoavina maha-olona sy ara-moraly. Tapa-kevitra isika.”
Saingy nilaza ireo vondrona mpiaro ny zon'ny vehivavy fa tsy ampy ny teny, satria mbola ahitana fitomboan'ny taha-pamonoana vehivavy i Tiorkia. Araka ny voalazan'ny We Will Stop Femicide, sehatra iray ao an-toerana mandrakitra ny herisetra atao amin'ny vehivavy, vehivavy 225 no maty teo anelanelan'ny volana Janoary sy Oktobra 2021. Fanaraha-maso hafa mandrakitra ny anaran'ireo vehivavy maty vokatry ny herisetra kosa mametraka ny isan'ireo niharam-boina ho 353 ny fitambarany ho an'ny taona 2021. Iray amin'ireo niharam-boina farany indrindra i Basak Cengiz, 28 taona, izay notsatohan'ny lehilahy iray antsy izay niaiky taty aoriana fa noho ny fahasorenana no nanaovany izany. Voampanga ho namono olona mahery vaika ity mpamono olona ity.
Nanavaozana ny antso ho an'i Tiorkia mba hanatevin-daharana indray ny fifanarahana iraisam-pirenena ny famonoana an'i Cengiz ; na izany aza, manohy manizingizina ny manampahefana – anisan'izany i Erdoğan – fa ampy ny lalàna anatiny. “Ho antsika, zavaboary masina indrindra ny vehivavy. Tsy avelantsika ho voaloto mihitsy ny fahamasinan'izy ireo”, voalaza fa nilaza izany ny filoha tamin'ny herinandro lasa teo, ary nampiany hoe: “Noho izany, tsy ilaina ny Fifanarahana Istanbul.”
Nambara tamin'ny volana Jolay 2021 ny “Drafitr'Asa Hiadiana amin'ny Herisetra mihatra amin'ny Vehivavy” an'ny governemanta ary ahitana tanjona toy ny fandinihana ny fizotran'ny fitsarana, fanatsarana ny tolotra fiarovana, ary fanangonana angon-drakitra momba ny herisetra. Hatreto dia voaporofo fa tsy misy dikany izany. “Tsy ampy ny lalàna amin'izao fotoana izao. Renay ny momba ireo vehivavy novonoina isan'andro, satria tsy ampy ny rafitra misy, na eo amin'ny sehatra ara-dalàna na ny sehatra fampiharana azy,” hoy i Ayşe Faride Acar, akademika Tiorka manara-maso ny fampiharana ny Fifanarahana Istanbul teo anelanelan'ny taona 2015 – 2019 nilaza tamin'ny AlJazeera tamin'ny tafatafa.
Ary miteny ho azy ny isa. Vao haingana i Berrin Sonmez avy ao amin'ny Sehatry ny Vehivavy ho an'ny Fitovian-jo no nilaza tamin'ny AFP fa hatramin'ny nialan'ny firenena tamin'ny fifanarahana tamin'ny volana marsa, vao mainka nitombo ny fahatsapana ho tsimatimanota. Hoy izy, “: “Vehivavy 180 no nisy namono teo anelanelan'ny volana Marsa sy Jolay 2021, ary ankoatra izany dia nisy 171 ny maty mampiahiahy. Tsy isa azo hamarinina izany.”
Naneho fahalianana voalohany tamin'ny fialàna tamin'ny fifanarahana i Erdoğan tamin'ny taona 2020. Nilatsaka ny fanapahan-kevitra farany taorian'ny nanambaran'ny filoha ny drafitra momba ny zon'olombelona izay lazainy fa “hanatsara ny zo sy ny fahalalahana ao Tiorkia ary hanampy ny firenena hanatratra ny fenitry ny Vondrona Eoropeana.”
Nandoko sary hafa ny hafanana teny an-dalambe tamin'ny 25 Novambra. “Ety an-dalambe izahay mitaky ny zon'ny vehivavy hiaro tena, hitaky ny rariny ho an'ny vehivavy novonoina, ny zony hiasa, ny zon'ny vehivavy lesbiana,” hoy ny mpandray anjara iray tamin'ny fihetsiketsehana, mpikambana ao amin'ny Tambajotra Fiarovana ny Vehivavy, fikambanana mampifandray ireo vehivavy mpikatroka manerana ny firenena, tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny AlJazeera. Nilaza ny mpandray anjara hafa tamin'ny fihetsiketsehana hoe: “Isan'andro ao an-tranonay, eny an-dalambe, any amin'ny toeram-piasanay, dia iharan'ny herisetra izahay”, ary nampiany hoe: “Leo izahay.”